Bibilava miloko fotsy miisa roa, voalohany amin’ny karazany eto an-tany, hita tao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Anisan'ny bibilava misy poizina indrindra eto an-tany ny Kraits
Voadika ny 26 Novambra 2020 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Deutsch, русский, Français, Nederlands, Español, українська, 日本語, English
Iray amin'ireo kraits bobo tsikaritra tao Nepal. Saripika avy amin'i Dev Narayan Mandal sy Ganesh Sah. Nahazoana alalana.
Araka ny gazety (taratasy) fikarohana nivoaka tamin'ny Oktobra 2020, ny kraits roa miloko fotsy (amin'ny karazana Bungarus) hita nandritra ny antsom-panavotana tao amin'ny Province No. 2 faritra atsimo-atsinanan'i Nepal no voalohany voarakitra amin'ny karazany. Fantatra amin'ny maha-bibilava misy poizina azy amin'ny zana-kaontinanta indiana azy ny kraits.
Tamin'ny 25 Avrily 2020 ny krait mpanara-drindrina (Bungarus Walli) iray miloko raozy sy manana maso miloko mainty no hita ao amin'ny monisipaliten'i Dhanushadham ao amin'ny faritanin'i distrikan'i Dhanusha.
“Natao tao anaty tavy tanimanga ny bibilava,” hoy ny fanazavan'i Ganesh Sah, mpanavotra biby mikisaka sy mpaka sary fiainam-biby mpirenireny nifampiresaka tamin'ny Global Voices tamin'ny alalan'ny telefônina. Nohazavainy fa nisy tambanivohitra iray nanaiky niteny fa tsy mpanavotra izy fa olona saika hanararaotra hahazo tombony tamin'ny fahitana ilay bibilava. “Tsy maintsy nandresy lahatra ny fokonolona aho vao navelany hamotsotra ilay bibilava amin'ny fonenany voajanahary.”
Mihoatra kely ny iray volana taty aoriana, tamin'ny 3 jona, nanavotra bibilava bobo iray hafa tao Dhanushadham faritra Kishanpur aho. Ity karazana Bungarus niger, antsoina mahazatra hoe krait mainty lehibe kokoa ity dia sahalahala amin'ilay iray hafa hita tany Matiarba tamin'ny Avrily:
Ohatra amin'ny tsy tokony hampiasana mihitsy ny loko irery ihany hamantarana ny bibilava misy poizina.
Lahatsoratra mahatalanjona avy amin'i Kamal Devkota sy ny ekipany amin'ny tatitra amin'ny laosisma [bobo] amin'ny karazana Krait roa samihafa ao Nepal.
Anarana: Krait Mainty sy Bibilava an-drano
Bibilava bobo (Leosisma sy albinisma)
Leosisma, toetra ara-fototarazo izay matetika afangaro amin'ny albinisma, dia teraka avy amin'ny fahaverezana feno na amin'ny ampahany ny kasinga mpanome loko, ka mahatonga ny fahafotsian'ny hoditra. Tsy mba tratran'izany kosa anefa ny lokon'ny maso.
Albinisma, indray etsy ankilan'izany, dia vokatra tsy fisian'ny melaninina, izay manome ny hoditra sy ny maso ny lokony. Hita ho volomparasy ny lokon'ny mason'ny bibilava bobo (albino) satria hita amin'ny anakandriamasony ny lalan-dra.
Nandritra ny antsafa an-telefônina, nanamarika i Kamal Devkota, mpitarika amin'ny mpanoratra taratasim-pikarohana, fa na ny leosisma na ny albinisma amin'ny bibilava misy poizina: mahatonga azy ireo ho mora tsikaritra ny volony, ka lasa hazan'ireo biby mpihaza ry zareo matetika, ary ny tsy fahafahan-dry zareo miafina noho ny volony-hodiny no mahatonga azy ireo ho sahirana amin'ny fahazoana sakafo. Ambonin'izany, tsy afa-miara-manova ny hafanany araka ny tokony ho izy ry zareo, ka misy fiantraikany amin'ny fomba fihetsiny sy ny fandevonan-kaniny izany.
VAKIO BEBE KOKOA:Sambany tany Nepal no nahitana bibilava kukri mitsipitsipika manan-doha roa [mg]
Bibilava misy poizina an'i Nepal
Mametraka ny taridalana ara-tsaripika Venomous Snakes of Nepal [Bibilava misy poizina ao Nepal] fa amin'ny karazam-bibilava miisa 89 voarakitra ao Nepal, dia heverina ho tena feno poizina sady mampidi-doza ny 17 — ka ao anatin'izany ny karazana kraits enina samihafa –.
Ny karazana krait manara-drindrina (Bungarus walli) dia manana loha, vatana ary rambo manavaka ny mainty mangilohilo, mainty-volontany na volombatolalaka, mitsipitsipika fotsy na manopy mavo manify dia manify. Voarakitra ao NepaI ao amin'ny lemaka atsimo atsinanana, ao amin'ny fivarinan-dranon'i Gange ao avaratr'i India, ary ao amin'ny faritra vinanin'i Bangladesh izany.
Ny krait mainty lehibe kokoa (Bungarus niger) manana loha sy vatana ary rambo mainty mangilohilo, mainty-volontany na volon-tsôkôlà matroka fa tsy misy tsipika na tsipitsipika. Voarakitra ao amin'ny lemaka sy lohasaha ao Nepal, Bhutan, India, Bangladesh ary Myanmar izy io.
Amin'ny alina no mavitrika ny Kraits ary mety hahafaty ao anatin'ny 24 ora ny kaikitra avy aminy. Manombana ny OMS fa olona manodidina 20.000 no voakaikitry ny bibilava isa-taona ao Nepal, ary mihoatra ny 1000 amin'izy ireo no maty. Fanadihadiana maro anefa no manolo-kevitra fa mety ho ambony kokoa ny isa.
Na dia latsaky ny 20 isanjato amin'ny karazam-bibilava hita ao Nepal aza no feno poizina, dia matahotra ny karazam-bibilava rehetra ny olona. Matetika dia matetika ny bibilavam-boalavo — izay tsy misy poizina — no heverina am-pahadisoana ho cobras, ary ny bibilavan'amboahaolo ho kraits.
Ny tsy fahalalana araka ny tokony ho izy ireo karazam-bibilava ireo no matetika miafara amin'ny famonoana ireny zavaboary ireny, saingy ny programa fampahafantarana sy fanorotoroana sy ny fametrahana ivotoerana torohay momba ny bibilava no nanova ny fomba fijerin'ny olona raha manavotra ny bibilava sy mampianatra ny olona momba azy ireny ny olon-tsotra sy fikambanana.